Déjà vu?: Hanomboka aloha be noho ny mahazatra ny famokarana iPhone 8 | Vaovao IPhone
Nandritra ny taona maro, talohan'ny nanamboarana iPhone vaovao dia nanomboka niely ny tsaho hoe: "Amin'ity taona ity, ny iPhone dia hamboarina ary halefa mialoha ny fotoana." Tsy mbola tanteraka ny tsaho ary mivezivezy indray amin'ity taona ity miantoka ny iPhone 8 dia hanomboka famokarana aloha kokoa noho ny nandrasana. Efa hita? Amin'ny voalohany eny, fa amin'ny 2017 dia manana antony hieritreretana isika fa azo atao izany: taona amin'ny faha-XNUMX taonan'ny iPhone.
Fa andao handeha amin'ny ampahany. OMS nanomboka Ny tsaho tamin'ity taona ity dia ny haino aman-jery Tech Trader Daily, izay anomezan'izy ireo toky fa nahita fambara tao amin'ny rojom-panomezana izay nahatonga azy ireo hieritreritra fa hampandroso ny famokarana betsaka ny iPhone 8 hatramin'ny Jona i Apple. Ny tsy itovizan'ity tsaho ity amin'ny an'ny teo aloha dia ny mpanelanelana tsy mieritreritra ny finday paoma manaraka dia hamidy alohan'ny septambraRaha ny tokony ho izy, ny tanjon'ireo ao Cupertino dia ny hanomezana antoka fa manana fotoana ampy handehanany tsara ny zava-drehetra.
iPhone 8: novokarina teo aloha; amidy toy ny mahazatra
Ny fampahalalana manitikitika indrindra hitanay dia manondro fa i Apple dia hanao ny iPhone ho avy manaraka alohan'ny fenitra mandavantaona, na dia tsy milaza aza izahay fa nisy fiovana tamin'ny drafitra famoahana iPhone 8 / X.
Mahaliana fa ny vakitenintsika amin'izao fotoana izao dia manome sosokevitra 300% amin'ny famokarana iPhone 8 / X amin'ny volana Jona, izay mahatratra 9 tapitrisa ankehitriny. Vokatr'izany, ny famokarana totalin'ny telovolana tamin'ny volana jona dia nisondrotra hatramin'ny 45 tapitrisa ka hatramin'ny 48 tapitrisa, miaraka amin'ny fiakarana maranitra amin'ny iPhone 8 offset na kely aza amin'ny fihenan'ny modely lova.
Na dia efa namaky tsaho toy izany aza isika tamin'ny taona lasa, dia tokony handinika zavatra roa momba ity taona ity isika: ny voalohany dia tamin'ny taona lasa izay dia azo antoka fa hanomboka hamokatra aloha kokoa ny iPhone miasa ary tokony handeha ihany koa atombohy aloha ny varotra, raha ny iray amin'ity taona ity dia milaza fotsiny fa hanomboka hanamboatra eo aloha. Ny zavatra faharoa tsy maintsy tadidintsika dia ny fahatsapana fa ireo izay avy any Cupertino dia maniry ny hanomboka manamboatra iPhone aloha kokoa izay ho avy miaraka amin'ny fanovana famolavolana manan-danja, manomboka amin'ny mety indrindra Fampisehoana OLED miaraka amin'ny Touch ID tafiditra ao anatiny. Ny antony iray hafa dia mety ho ny rafitra famandrihana vaovao, izay mety ho tsy misy tariby (hiampanga azy lavitra) na amin'ny fidirana an-tsokosoko, amin'ny tranga faharoa dia rafitra mandroso izay mamela, ohatra, iPhone hahazo fiampangana amin'ny fiankinana amin'ny iPad.
Ilaina ny mijery raha tanteraka ny tsaho amin'ity taona ity. Azonao an-tsaina ve fa ny iPhone 8 dia amidy amin'ny volana Jona toy ilay iPhone tany am-boalohany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Déjà vu?: Famokarana iPhone 8 hanomboka aloha kokoa noho ny mahazatra
Gil0037 dia hoy izy:
Ka amin'ity taona ity angamba dia hivoaka ny iPhone 8 fa tsy ny iPhone 7?
Valiny ho an'i Gil0037
Apple dia miomana hanangana UAC, mpampitohy MFi kely kely kokoa sy matanjaka kokoa